Munaasabad lagu maamuusayey maalinta barakaysan ee Ciidul-Adxa oo lagu qabtay xarunta idaacada Daljir Buuhoodle. – Radio Daljir
Munaasabad lagu maamuusayey maalinta barakaysan ee Ciidul-Adxa oo lagu qabtay xarunta idaacada Daljir Buuhoodle.
Buuhoodle, Nov 27 – Iyadoo maanta ay ahayd maalin farxad leh, oo ku aadey dharaarta barakaysan ee Ciidul Adxa, ayaa waxaa si weyn looga ciidey, guud ahaan dunida caalamka, gaar ahaan Puntland, Somaliya.
Magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa idil ahaantoodba waxaa looga ciidey si wada jir ah, iyadoo Bulshooyinka Ku dhaqan, Magalooyinka Puntland, ay Si farxad Iyo Nabdgelyo Ku dheehantay U tukadeen, salaada ciidda.
Magaalooyinka Sida weyn looga ciidey waxaa ka mid ah Boosaaso, Buuhoodle, Garoowe, Galkacyo, Qardho Iyo guud ahaanba magalooyinka kale ee Puntland.
Magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa ka mid ahayd meelaha sida weyn looga xusay maalintan barakaysan ee Ciidul Adxa, oo sanadkiiba la xuso 9-ka bisha Dulxaj ee Hijriyada Islaamka.
Subaxnimadii hore ee saaka ayaa dadweynaha u nool magalada Buuhoodle waxay isugu Soo baxeen garoonka weyn ee kubada cagta ee Xabado Stadium Buuhoodle, halkaasoo lagu tukadey labada rakcadood ee salaada ciida.
Markii laga soo dareeray Salaada Ciida ayaa Munaasibad balaadhan oo ku saabsan ciidan barakaysan lagu qabtay xarunta Idaacada Daljir Buuhoodle.
Munaasibadan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka Idaacada Daljir ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle sida cuqaasha, culimaau-diinka, Issimada, laamaha amaanka, waxbarashda, caafimaadka, ururada dhalinyarada, iyo dhamaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Buuhodle.
Munaasibadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa ugu horayn waxaa aayadaha Qur?aanka kariimka ah ku furay Sh. Axmed Sh. Cumar oo ka mid ah shuyuukhda sida aadka ah looga yaqaano Gobolka Cayn iyo nawaaxigiisa.
Sh. Axmed ayaa dhamaan Umada Muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan u diray hambalyo munasibada ciida darteed.
Sidoo kale Sh. Axmed ayaa u mahadceliyey maamulka sare ee idaacada Daljir oo qaban qaabada munaasibada lahaa, iyo weliba maamulka Daljir Buuhoodle.
Intaasi kadib waxaa lagu soo dhaweeyey Agaasimaha idaacada Daljir Buuhoodle Khadar Cawl Ismaaciil oo dhamaan mahadcelin balaadhan ujeediyey ka soo qaybgalayaasha munaasabada ay Idaacadu u qabatay maalinta ciida.
Sidoo kale Agaasimaha ayaa warbixin kooban ka bixiyey mudadii yarad ee idaacadu ka furnayd gobolka Cayn isagoo tilmaamay waxyaabaha ay u soo kordhisey bulshada ku nool gobolka Cayn.
Agaasime Khadar sdioo kale waxaa uu warbixin kooban ka bixiyey dedaalka dheer ee loo soo galay sidii dhidibada loogu taagi lahaa Daljir buuhoodle, taas oo guul laga gaarey.
Waxaa uu carabka ku dhuftay turunturooyin iyo caqabado badan oo ku yimid maamulka Daljir xiligay halganka ugu jireen furitaanka xarunta Buuhoodle.
?Waxaa jira turunturooyin iyo caqabdo badan, oo lagala horyimid Idaacda Daljir Buuhoodle, hase ahaatee waxaa guul laga gaarey himiladii maamulka Daljir ee xarunta Buuhoodle” ayuu yiri Agaasimaha Daljir Buuhoodle.
Agaasime Khadar isaga oo ka hadlaya dad weli caqabado ku haya idaacada ayaa sheegay in cidii ka shaqaysa xumaanta idaacada aysan xumayn Daljir Iyo maamulkeeda, balse buu yiri ay xumeeyeen bulshada gobolka Cayn.
?Waxba uma dhimi karaan mihnada Daljir Buuhodle, hase yeeshee cida wax la yeelayaa waa bulshada Buuhoodle, markaa bulshadu dadkaas waa in ay iska qabato iyadu …? ayuu yiri Agaasimaha idaacada Daljir Buuhoodle.
Intaasi kadib, waxaa hadalka lagu soo dhaweeyey xisaabiyaha wasaarada maaliyada gobolka Cayn C/qaadir Maxamed Hiirad oo mahadcelin balaadhan ujeediyey Idaacada Daljir, isagoo tilmaamay mudadi ay ka furayd magaalada Buuhoodle in ay wax badan ka bedeshey dareenka bulshada oo uu tilmaamay in dadweynaha gobolku aad u soo dhawaynayaan barnaamijyada kala duwan ee ka baxa Daljir Buuhoodle.
Waxaa isna madasha ka hadlay Caaqil C/raxmaan Axmed Olol oo ka mid ah cuqaasha Buuhoodle. Caaqil Olol ayaa maamulka Daljir Buuhoodle kula dardaarmay in ay halkaa ka sii wadaan shaqada ay u hayaan bulshada, isla markaana kula taliyey in ay ka digtoonaadaan waxyaabaha bulshada dhibka ku keeni kara.
Dhinaca kale, waxaa hadalka isaga danbeeyey mas’uuliyinta kale ee ka soo qayb galay munaasabada sida laamaha amaanka, cuqaashii kale, iyo ururada bulshada.
Gabagabdii, waxaa munaasabada duco iyo dardaaran ku soo khatimay Garaad Ibraahim Baaruud Guutaale.
Si kastay ahaataba, munaasabadan ay soo qaban qabiyeen maamulka sare ee Idaacada Daljir ayaa ku soo dhamaatay jawi wanaagsan oo farxadi ku dheehan tahay iyadoo dhamaan dadkii kasoo qayb galay munaasabada u mahadceliyeen maamulka idaacada Daljir.